अभिनेत्री एवं निर्देशक दीपा श्री निरौलाले महानायक राजेश हमाल का`ण्डपछि पहिलो पटक मिडियामा – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/अभिनेत्री एवं निर्देशक दीपा श्री निरौलाले महानायक राजेश हमाल का`ण्डपछि पहिलो पटक मिडियामा
अभिनेत्री एवं निर्देशक दीपा श्री निरौलाले महानायक राजेश हमाल का`ण्डपछि पहिलो पटक मिडियामा
काठमाण्डौ । अभिनेत्री एवं निर्देशक दीपा श्री निरौलाले महानायक राजेश हमाल का`ण्डपछि पहिलो पटक मिडिया फेस गरेकी छन् । उनले आज शुक्रबार मिडिया फेस गरेकी हुन् । उनले आज एक मिडियासंगको अन्तरवार्तामा महानायक का`ण्डमा आफुलाई दर्शकबाट खानु परेको गा`लीले अझैं परिपक्क बनाएको बताएकी छन् । निर्देशक निरौलाले कलाकार भनेको गा`ली र ताली दुवैको हकदार भएको बताउँदै महानायक का`ण्डमा आफुले खानु परेको गा`लीले आफुलाई अझैं परिपक्क बन्नमा सहयोग गरेका बताएकी छन् ।
उनले १७ वर्षदेखि यो क्षेत्रमा आवद्ध भएर काम गरिरहंदा एकै खालको लहरमा काम गरेको हुनाले यस्तो गा`लीको कहिल्यै सामना गर्न नपरेको पनि अनुभव सुनाएकी थिईन् । अन्तरवार्ताकै क्रममा निर्देशक निरौलाले दर्शकबाट आएको अ`श्ली`ल अप`मानले आफुलाई कुनै पनि ग`म्भिर विषयमा बोल्नुपर्दा मन, मस्तिष्क र जिब्रो यी तीनै कुराको तालमेल मिलाएर बोल्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा सिकाएको बताईन् ।
अन्तरवार्ताकै क्रममा उनले आफुलाई त्यस्ता अप`मानि`त शब्दले भरिएका गा`लीहरुले निकै नै पि`डा दिएको सुनाउँदै केही समय भा`वुक पनि बनिन् । सोही क्रममा चरि`त्र नै ह`त्या गर्ने गरी गरिएको त्यस्ता गा`लीहरु जीवनमै पहिलो पल्ट सुन्नु परेको हुनाले आफुलाई त्यो कुराले एकदमै पि`डा दिएको बताउँदै उनी भ`क्का`निईन् । कुराकानीकै त्रममा निर्देशक निरौलाले आफुले महानायलाई त्यो अन्तरवार्तामा कुनै अ`श्ली`ल शब्द प्रयोग गरेर गा`ली नगरेको पनि बताईन् ।
उनले आफुले महानायको बारेमा धेरै राम्रा कुराहरु पनि गरेको तर ती कुराहरुलाई नदेखाईएको भन्ने अभि`व्यक्ति पनि पहिलो पटक मिडियामा सार्वजनिक गरिन् । निर्देशक निरौलाले आफुले जीवनमै कहिल्यै कसैलाई अ`ण्ड`रस्टि`मेट नगरेको पनि बताईन् । उनको भनाई अनुसार यो कुरा प्रष्ट बुझ्न सकिन्थ्यो कि उनले कसैलाई पनि जीवनमै कहिल्यै पनि अ`ण्ड`रस्टि`मेट गरेकी छैनिन् भने कसरी महानायकलाई अ`ण्डर`स्टि`मेट गर्न सकिन् र ? पहिलो पटक महानायक का`ण्डपछि मिडियासंग दीपाले महानायक का`ण्ड बारेमा बोलि रहंदा उनीसंगै उनका पार्टनर दीपकराज गीरी पनि संगै नै थिए ।
दर्शकबाट दीपा श्रीले खाएको गा`लीले उनलाई धेरै नै पि`डा दिएको कुरा दीपा श्रीले सुनाउँदै गर्दा उनी निकै बेर रो`ईरहेकी थिईन् । आफ्नै अगाडी दीपा त्यसरी भ`क्का`निएर रोईरहंदा पनि यसपालि भने दीपकले दीपालाई फकाएन्न् । बरु उल्टै दीपालाई आफ्नो आ`शँु आफै पुच्छनु पर्छ र बलियो हुनु पर्छ भन्ने सांकेतिक भावमा दीपाको दु`खाईमा आफु पनि दु`खि भएको महसुस दीपालाई गराई रहेका थिए ।
public news nepal
गोडाको भर’मा जहाज उडाएर गिनिज बुक आफ दि वल्र्ड रेकर्डमा दुवै हात नभएकी संसारकै एकमात्र महिला पाइलट हुन् जेसिका कक्स
कहाँ बाट आए शनि ता,,माङ ? जस्ले काठमाण्डौमा घटाए डर,,ला,,ग्दो घ,,टना !
नायिका स्वस्तिमा खड्का अभिनित फिल्म ‘चिसो मान्छे’को ट्रेलर रिलिज (भिडियो)
बिदेश जान्छु भनेर हि’डे’की श्रीमती बिगत एक महिनादेखि बे’प’त्ता,छोराछोरीको बि’च’ल्ली(भिडियो हेर्नुस)
आकाशमा उड्ने सपना.. आकाशमै विलिन : होस्ट्रेस किस्मी थापा